YEYINTNGE(CANADA): Monday, December 19
ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ပြုပြင်မည့် နှစ် (၃၀) စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်၊ တိုးပွားမည့် လူဦးရေအတွက် လိုအပ်ပါက မြို့တော်နယ်နိမိတ်အား ချဲ့ထွင်နိုင်ရေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေး
ရန်ကုန်မြို့တော်အား ပြုပြင် ဖွံ့ဖြိုးစေမည့် Yangon City Concept Plan (2040) ရေးဆွဲရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နှင့် ၁၆ ရက်နေ့တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းရှိ Micasa ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန် မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဌာန ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် စီးပွားရေးပညာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ စာတမ်း၂၅ စောင် ဖတ်ကြား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဆွေးနွေးရာတွင် ရေတိုအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လူနေကျဲပါးသည့် နေရာများတွင် လူနေထူထပ် ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်လာပါကမူ မြို့ဧရိယာအား ထပ်မံချဲ့ထွင်နိုင်ရေး စဉ်းစားသင့်ကြောင်းကို စာတမ်းရှင်အချို့က တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိအနေအထားအရ ရန်ကုန်မြို့နေ လူထုအတွက် အိမ်ရာဖြင့် နေထိုင်မှုမှာ အိမ်ထောင်စု ၁၄ စုလျှင် ၁၀ အိမ်နှုန်းဖြင့် နေထိုင်နေရ . . .
အခြေခံအိမ်ယာ လိုအပ်ချက် ဘယ်လိုရှိမလဲ
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်က ရန်ကုန်မြို့၏ လူဦးရေမှာ လေးသန်းနီးပါးခန့်သာရှိပြီး လက်ရှိတွင် ငါးသန်းကျော် မှ ခြောက်သန်းနီပါးအထိ တိုးပွားလာရာ အဆိုပါလူဦးရေအတွက် အခြေခံအိမ်ယာ လိုအပ်ချက်မှာလည်း အဓိကအရေးကြီးသော အချက် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအနေအထားအရ ရန်ကုန်မြို့နေလူထုအတွက် အိမ်ရာဖြင့်နေထိုင်မှုမှာ အိမ်ထောင်စု ၁၄ စုလျှင် ၁၀ အိမ်နှုန်းဖြင့် နေထိုင်နေရသည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့လယ် တစ်နေရာကို တွေ့ရစဉ်
“တိုးပွားလာမယ့်လူဦးရေအတွက် သူတို့တွေ ဘယ်မှာနေမလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ လူဦးရေက နောက်ထပ်ငါးသန်းထပ်တိုးမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အိမ်ရာလိုအပ်ချက်ကလည်း များလာနိုင်ပါတယ်။ တွက်ချက်မှု တွေအရ လာမယ့် ၂၀၄၀ မှာရန်ကုန် မြို့မှာ တစ်နှစ်ကို အိမ်ရာ ၂၅၀၀၀ လောက်လိုအပ်မယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း တွက်ချက်ထားပါတယ်။ ပေ ၄၀_ပေ ၆၀ နဲ့တွက်ချက်ရင် တစ်နှစ်ကိုမြေဧက ၂၅၀၀ လောက် လိုအပ်ပါမယ်။ အခု ရန်ကုန်မြို့မှာစက်မှုဇုန်တွေများနေလို့ လူနေသိပ်သည်းမှုလျော့နည်းတာလည်း တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မြို့သစ် တွေက တချို့လူနေကျဲတဲ့နေရာတွေ မှာ အိမ်ရာစီမံကိန်းတွေ ဆောက်ပြီး တိုးလာမယ့် လူဦးရေအတွက် ထိန်းသွားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်”ဟု မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကတင်ပြဆွေးနွေး သွားခဲ့သည်။
နှစ်ဆတိုးလာမယ့် လူဦးရေနဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်
လာမည့် ၂၀၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် နှစ်ဆတိုးလာမည့် ရန်ကုန်မြို့၏ လူ ဦးရေအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိကာလအထိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပမာဏကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းမှ ရရှိသောလျှပ်စစ် အရင်းအမြစ်များဖြင့် အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ ယင်းအတွက် နိုင်ငံတော်၏ ဓာတ်အား စနစ်မှ လိုအပ်ချက်ကို ရယူသုံးစွဲနေရသည်။
“ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း က ထုတ်တဲ့ ဓာတ်အားခွဲရုံ အကုန်လုံးက ဓာတ်အားတွေက ပေးဝေတဲ့ပမာဏက မလုံလောက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဓာတ်အားစနစ်ကနေ လိုအပ်ချက်ကို ရယူသုံးစွဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာက သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကလည်း ခွဲတမ်းနဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ ရေအားလျှပ်စစ်ကလည်း မထုတ်နိုင်ဘူး။ ဒီအခြေအနေကြောင့်မို့ မလုံလောက်တာပါ။ ပြီးတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဓာတ်အားပေးစနစ်က တောင်နဲ့မြောက် ကို သွယ်တန်းပြီး ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြားထဲမှာ ဓာတ်အားလျော့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုးလာတဲ့ လူဦးရေအတွက်ဖြည့်ဆည်း နိုင်အောင်လို့ ၂၃၀ ကေဗီ၊ ၆၆ ကေဗီ ပတ်လမ်းတွေနဲ့ ဓာတ်အားပေးတာ လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့ တော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးအဖွဲ့မှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးကျော်ကျော်က ယင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် တင်ပြဆွေးနွေး သွားခဲ့သည်။
အကယ်၍ ရန်ကုန်မြို့ဧရိယာအား ထပ်ချဲ့ရန် လိုအပ်လာပါက တောင်ပိုင်းခရိုင်ဖြစ်သော ဒလ၊ သန်လျင်၊ ကျောက်တန်း၊ ကွမ်းခြံကုန်း ပင်လယ်ဝဒေသများအထိ ချဲ့ထွင်၍ ရနိုင်ကြောင်း . .
ရေလိုအပ်ချက်ကို ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာလဲ
လက်ရှိကာလ အနေအထားအရ ရန်ကုန်မြို့၌ တစ်ရက်လျှင် ရေ ဂါလန် ၁၆၀ သန်းပေးဝေနိုင်သဖြင့် လိုအပ်ချက်များရှိနေသေးကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့နေလူထု အနေဖြင့် မြို့တော်စည်ပင်၏ ရေပေးဝေမှုကို ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ သုံးစွဲနေ ပြီး ကျန်ရှိသည့် ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြို့တော်စည်ပင်၏ ရေပေးဝေမှုကို မသုံးစွဲဘဲ ကိုယ့်အစီအစဉ်ဖြင့်သာ သုံးစွဲနေကြကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “တိုးလာမယ့်လူ ဦးရေအတွက် ရေလိုအပ်ချက်ကလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ၂၀၄၀ Structure Plan အရ တိုးမြင့်လာမယ့် လူဦးရေအတွက် ပြေလည်စေမယ့် ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်း အသစ်တွေကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လျာထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်စီမံကိန်း သုံးလေးခုလောက် စဉ်းစားထား တယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေ ပြီးရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့ကို တစ်နေ့ရေဂါလံ သန်း ၅၂၀ အထိ ပေးဝေလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခုလက်ရှိ ရေပေးဝေမှုကိုလည်း ကောင်းအောင်လုပ်မယ်။ ရေအလေအလွင့် နည်းပါး အောင်လုပ်မယ်။ လက်ရှိပိုက် network တွေကလည်း နှစ် ၁၀၀ ၀န်း ကျင်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် တချို့ ပိုက်ပေါက်ပြီး ပေးသလောက် မရောက်တာလည်းရှိပါတယ်။ ခုတော့ downtown မှာ ပိုက်တွေပြန်ပြင်နေပါတယ်။ မြို့တိုးချဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြို့တွင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်နေတဲ့ရေကို အလုံအလောက် ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်။ အ၀ီစိတွင်းတူးတာတွေကိုလည်း လျှော့ချသွားဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်မြို့နယ် အောင်ဇေယျတံတားအနီး တစ်နေရာကိုတွေ့ရစဉ်
မိလ္လာစနစ်လည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်
မိလ္လာစနစ်မှာလည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်လျက်ရှိရာ ယခုလက်ရှိရန်ကုန် မြို့၏ မိလ္လာစွန့်ပစ်မှုစနစ်မှာ အဆင် ပြေစေရုံဆိုသည့် အတိုင်းအတာသာ ရှိနေသေးကြောင်း၊ ၂၀၄၀ တွင် မဟုတ်ဘဲလာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း၌ပင် ယခုလက်ရှိ မိလ္လာစနစ် အတိုင်းအသုံးပြုရန်ပင် အခက်အခဲ များရှိလာမည် ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းအတွက်ကိုလည်း စဉ်းစားသင့်သည်ဟု သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ လက်ရှိမိလ္လာစွန့် ပစ်မှုစနစ်မှာ မြို့တွင်းခြောက်မြို့နယ် နှင့် ဒဂုံမြို့နယ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တစ်စိတ် တစ်ဒေသတို့ကို မိလ္လာပြွန်စနစ်ကို အသုံးပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြား မြို့နယ်များတွင်မူ ပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း၊ မိလ္လြွာပန် စနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနေသော မိလ္လာတွန်းစက်အိုးများမှာ ၁၂၃ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်၍ နှစ်စဉ်ပြုပြင်မွမ်းမံ၍ အသုံး ပြုနေရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“သန်လျက်စွန်း ရေဆိုးသန့်စင် စက်ရုံမဖွင့်ခင်က ရန်ကုန်မြို့ကထွက် ရှိတဲ့ရေဆိုးတွေကို မြစ်ထဲကို တိုက် ရိုက်စွန့်ပစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် သန်လျက်စွန်း ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံ ဖွင့်ပြီးမှာတော့ ရေဆိုးတွေကို စက်ရုံ မှာသန့်စင်ပြီးမှ မြစ်ထဲကို စွန့်ပစ်မှု လုပ်ခဲ့တယ်။ တိုးလာမယ့်လူဦးရေ အတွက်ကို မြစ်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ အလုံ၊ ပိတောက်ချောင်းစတဲ့ နေရာတွေမှာ ရေဆိုးသန့်စင်နိုင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ တိုးချဲ့လို့ရပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း နေထိုင်သော လူဦးရေနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နိုင်သည့် အမှိုက်သိမ်းဆည်း စွန့်ပစ်မှုစနစ်မှာလည်း အခြေခံလိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအနေအထားအရ အမှိုက်သိမ်းစနစ်တွင် အားနည်းမှုအချို့ ရှိနေကြောင်း၊ ၂၀၄၀ လူတစ်ဦး၏ အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုမှာ ၀ ဒသမ ၅ ကီလို ဂရမ်ရှိလာမည်ဖြစ်၍ အမှိုက်သိမ်း လုပ်သားဝန်ထမ်း ၂၀၀၀၀ ခန့်၊ အမှိုက်သိမ်းယာဉ် အစီးရေ ၁၀၀၀ ခန့် လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ ယင်းအတွက်ကိုလည်း ကြိုတင်စီမံထားရန် လိုအပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ စာတမ်းရှင်တစ်ဦးက ဖတ်ကြားဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“လူဦးရေတိုးလာနဲ့အတူ လူ တစ်ဦးရဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုက နှစ်ဆနီးပါး တိုးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှိုက်သိမ်းဝန်ထမ်း၊ ကားတွေလိုလာမယ်။ နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်တဲ့ အမှိုက်ပုံနေရာ တွေ ရွေးချယ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ရေထု၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပါ။ မြစ်ကမ်း နံဘေးစက်ရုံတွေက စွန့်ပစ်တဲ့ ရေဆိုးတွေက မြစ်တွေထဲကို ရောက်ရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် မြစ်ရေညစ်ညမ်းမှုတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကိုထိန်း ချုပ်ဖို့အတွက် National စံနှုန်းတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အာဆီယံစံနှုန်း တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးပြီး ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်”ဟု ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လေ့လာ လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အဓိကလမ်းမကြီးများအဖြစ် ပြည်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး စေတီလမ်းစသည်တို့ တည်ရှိကြောင်း၊ အရှေ့အနောက်သွယ်တန်း လမ်းများအဖြစ် ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ ပါရမီ လမ်း စသည်တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကောက်ယူခဲ့သော စာရင်းအရ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတွင် လမ်းမိုင်ရှည် စုစုပေါင်း ၂၇၆၉ မိုင် ရှိကြောင်း၊ ယင်းလမ်းမျာအား အမျိုးအစားများ ခွဲခြားထားပြီး ကတ္တရာလမ်း၊ ကွန်ကရိလမ်း၊ မြေသားလမ်း တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆက်သွယ်သွားလာရေးတွင် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ ပင်လယ် ရေကြောင်းလမ်း၊ လေကြောင်းလမ်း တို့အနက် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆက်သွယ်သွားလာနေသည်မှာ ကားလမ်း မှဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းများကောင်း မွန်မှသာ အချိန်တိုအတွင်း သွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နေရာအများစုတွင် လမ်းပျက်စီးမှု များပြားနေခြင်းကြောင့် ခရီးလမ်း တစ်ခုအား အချိန်တိုအတွင်း သွားလာ၍ မရနိုင်ခြင်း၊ အချို့နေရာများတွင် လမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်းကြောင့် ကားပိတ်ဆို့မှုများ ရှိနေသည်။
ယာဉ်အစီးရေသုံးသိန်းနဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာ
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် လက်ရှိ ယာဉ်အစီးရေမှာ သုံးသိန်းခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ကားအစီးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ ကိုယ်ပိုင်ကားများဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအများဆုံး အငှားကားနှင့် ခရီးသည်တင် ဘတ်စကားများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ရှိရန်ကုန်မြို့၏ ယာဉ်အစီးရေနှင့်ပင် ရန်ကုန်မြို့တွင်းနေရာ အတော်များများတွင် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် လှည်းတန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ သမိုင်းလမ်းဆုံ၊ ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ၊ မြေနီကုန်းလမ်း ဆုံများသည် ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေးမှု များပြားသည့် အဓိက ပစ်မှတ်နေရာ များဖြစ်ပြီး ရုံးဆင်းရုံးတက်ချိန်များတွင် ပိုမိုဆိုးရွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်း ၂၈၃ လိုင်းရှိရာ အဆိုပါ လိုင်းများမှ မြို့တွင်းအလယ်ဧရိယာ ကိုသာ ဗဟိုပြုပြေးဆွဲနေကြ၍ မြို့တွင်း ဧရိယာတွင် ယာဉ်ကြောပိတ် ဆို့မှုများရှိနေကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ကား များအနေဖြင့်လည်း မြို့တွင်းဧရိယာ လမ်းမများပေါ်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်တန့်ထား၍ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု များဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့လက်ရှိ ကားအစီးရေနှင့်ပင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ကြီးထွားနေရာ ထပ်မံ၍ လူဦးရေတိုးလာပြီး ကားအစီးရေတိုးလာပါက ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပိုမိုဆိုးရွားလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကားမှတ်တိုင်အချို့မှာ ကားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိခြင်းကြောင့် ကားများမှတ်တိုင်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်တန့်ထားမှုကလည်း ပြဿနာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ယာဉ်ရပ်နား နိုင်သည့်နေရာ အလုံအလောက် မရှိခြင်းကလည်း ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။
တိုးပွားလာမယ့် လူဦးရေအတွက် မြို့ဧရိယာတိုးချဲ့ဖို့ လိုသလား
လက်ရှိအနေအထားအရ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဧရိယာများတွင်သာ လူနေ ထူထပ်သိပ်သည်းမှု များပြားနေပြီး လှိုင်သာယာကဲ့သို့ မြို့သစ်အချို့မှ လွဲ၍ အခြားမြို့သစ် ဧရိယာများတွင် လူနေထိုင်မှုကျဲနေကြောင်း သိရသည်။ မြို့သစ်ဧရိယာများတွင် စက်မှုဇုန်ဖော်ထုတ်မှု များသည့်အတွက် လူနေထိုင်မှု ကျဲပါးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ ကြောင်Structure Plan တွင် ကာလတို စီမံချက်အနေဖြင့် လူနေထိုင်မှု ကျဲသည့်မြို့နယ်များတွင် လူနေထူထပ် သိပ်သည်းလာအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်လာပါ က မြို့ဧရိယာကို တိုးချဲ့သင့်ကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
“အခု Structure Plan က မြို့ သစ်တိုးချဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့ကိုတော့ မသတ်မှတ်ရသေးဘူး။ ရှိပြီးသား မြို့သစ် မြို့နယ်ထဲက လူနေကျဲတဲ့နေရာတွေ ကို ဒီထက်လူနေ ထူထပ်လာအောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ပဲ ဆောင်ရွက်သင့်တယ်။ နောက် ၁၀ စုနှစ် တစ်ခုလောက်ကြာတဲ့အခါ ရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ လူတွေ၊ တိုးလာမယ့်လူတွေ အတွက်ပဲ မြို့ချဲ့ဖို့လိုတာပါ”ဟု ဗိသုကာ ပညာရှင်တစ်ဦးက ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အကယ်၍ ရန်ကုန်မြို့ဧရိယာ အား ထပ်ချဲ့ရန် လိုအပ်လာပါက တောင်ပိုင်းခရိုင်ဖြစ်သော ဒလ၊ သန် လျင်၊ ကျောက်တန်း၊ ကွမ်းခြံကုန်း ပင်လယ်ဝဒေသများအထိ ချဲ့ထွင်၍ ရနိုင်ကြောင်း စာတမ်းရှင်တစ်ဦးက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“ရန်ကုန်Structure Plan ၂၀၄၀ မှာ လူဦးရေးတိုးလာရင် လိုအပ်လာပါက ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ခရိုင်ကို လေးခုကနေငါးခုအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း တင်ပြချင်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၁၀ သန်းကို ဖြန့်ကျက်နေရာချနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် တောင်ပိုင်းခရိုင်ဘက်ကို ချဲ့လို့ရနိုင် ပါတယ်။ တောင်ပိုင်းခရိုင်က အခြေချနေထိုင်လို့ရတဲ့ အနေအထားရှိနေ တယ်။ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကတော့ ငလျင်ကြောတွေနဲ့ ရှိနေတဲ့အတွက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တိုးလာမယ့် လူဦးရေ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာကို ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးနဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တို့က ယူလို့ရနိုင်တဲ့ အနေအထားမို့ လို့ပါ”ဟု စာတမ်းရှင်တစ်ဦးက ဆွေးနွေးတင်ပြသွားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူခဲ့သော စစ်တမ်းအရ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင် အစိုးရဆေးရုံ ၁၆ ခုနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ ၁၀ ခုဝန်းကျင်၊ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်တွင် အစိုးရဆေးရုံ ၁၀ ခုနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ၂၁ ခု၊ တောင်ပိုင်း ခရိုင်တွင် အစိုးရဆေးရုံ ၂၃ ခုနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ တစ်ခု၊ မြောက်ပိုင်း ခရိုင်တွင် အစိုးရဆေးရုံ ၂၅ ခုနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံငါးခုတို့ဖြင့် ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူနေရခြင်း ဖြစ်ပြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွင်း ပျမ်းမျှ ဆရာဝန်တစ်ဦးလျှင် လူနာ ၃၆၃၈ ဦး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ဆရာဝန် တစ်ဦးလျှင် လူနာ ၁၄၀၀ ဦး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် ဆရာဝန်တစ်ဦးလျှင် လူနာ ၁၈၁၇၆ ဦးနှင့် မြောက် ပိုင်းခရိုင်တွင် ဆရာဝန်တစ်ဦးလျှင် ၁၃၆၄၇ ဦးဖြင့် ကုသနေရသည်ဟု စာတမ်းရှင်တစ်ဦးက တင်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။
“ဆရာဝန်နဲ့ လူနာအချိုး မညီမျှတာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း တီဘီနဲ့ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါ ကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်း အများဆုံးဖြစ် နေတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တိုးပွားမယ့်လူဦးရေအတွက် Structure Plan စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကလည်း အရေးကြီးပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ စာတမ်းရှင်တစ်ဦးက ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
စိမ်းလန်းမှု ဧရိယာ လျော့ကျလာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ မြို့လယ် ဧရိယာများဖြစ်သော ကျောက်တံတား၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်များတွင် တစ်ဧက၌ လူဦးရေ ၄၀၀ ခန့်နေထိုင်ကြောင်း၊ ထို့အတူ လသာ၊ ပုဇွန်တောင်စသော နေရာများတွင်လည်း လူနေထိုင်မှု သိပ်သည်းလာခြင်းကြောင့် မြို့တွင်း ဧရိယာများတွင် စိမ်းလန်းမှုဧရိယာ (Green Area) မရှိသလောက် နည်းပါးသွားကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“အခုရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ စိမ်းလန်းမှု လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ ကြောင့် လူဦးရေတိုးရင် ရန်ကုန်မြို့ က ပိုမိုလာနိုင်ပါတယ်။ စိမ်းလန်းမှု ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် City Plan မှာ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေး ဆွဲပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကန်တော်ကြီး၊ အင်းယားပတ်ဝန်းကျင်အပြင် လှော် ကားကန်ဧရိယာ ၀န်းကျင်ကိုလည်း တစ်နည်းတစ်ဖုံ ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်”ဟု မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန် ကြားရေးမှူး ဒေါ်လှိုင်မော်ဦးက ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မြို့ပြအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မှုများပြားလာခြင်းနှင့် အတူ သဘာဝမြင်ကွင်းများပိတ်ဆို့ လာခြင်းကိုလည်း ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင် ကွင်းများပိတ်ဆို့လာခြင်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန်လိုကြောင်း၊ ဆူးလေ ဘုရားပတ်ဝန်းကျင်လည်း အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်လာမှုကြောင့် ဘုရားပတ်လည်မီတာ ၃၀၀ အတွင်း အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မှုများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံတွေကိုလည်း ဧရိယာသတ်မှတ်ပြီး ထိန်သိမ်းသင့်တယ်
လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ၁၈၉ လုံး ရှိသည့်အနက် မြို့လယ်ဧရိယာ ဖြစ်သော ကျောက်တံတားမြို့နယ် တွင် ၃၉ လုံးဖြင့် အများဆုံးဖြစ်နေ ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံရှိသည့် နေရာများကို သာမက ယင်းနှင့်ဆက်စပ် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထိန်းသိမ်းမှုဧရိယာများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ၀န်ကြီးများရုံး ကဲ့သို့ အဆောက်အအုံများမှာ ဗိသုကာလက်ရာအရ သာမက မြို့တည်သမိုင်းအရပါ ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း လည်း ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
“ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ စာရင်းတွေကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၁၈၉ လုံး ရှိပါတယ်။ ဆူးလေဘုရားတ ည်ရှိရာ ကျောက်တံတားမြို့နယ်မှာ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ၃၉ လုံးရှိပြီးတော့ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံအများဆုံး တည်ရှိရာမြို့နယ် ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေထူထပ်တယ်၊ မြင်ကွင်းလမ်း ကြောင်းတွေ၊ Landmark အရပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆောက်အအုံသစ်တွေ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် အဆောက်အအုံအမြင့်နဲ့ ဒီဇိုင်းကို စနစ်တကျ စိစစ်ခွင့်ပြုဖို့ လိုအပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ အဆောက်အအုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးချက်များအပေါ်တွင် ဗိသုကာပညာရှင်တစ်ဦးက “ပြည်လမ်းက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံး နေရာကို ယူလိုက်ပြီး လွတ်တဲ့မြေကွက်လပ်မှာ အဆောက်အအုံဆောက်တာ Image Heritag ကိုထိခိုက်တယ်။ အလားတူ ၀န်ကြီးများရုံးကိုလည်း ထိန်သိမ်းပေးမယ်လို့ပြောပြီး ယူသွားမယ်။ ပြီးတော့ဘေးက မြေကွက်လပ် မှာ အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” ဟု အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် အစီအစဉ်ကျနမှုမရှိသော မြေအသုံးချမှုများ၊ အစိုးရပိုင်မြေနှင့် စည်ပင်ပိုင်မြေများအား ကျူးကျော်နေထိုင်မှုများ၊ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ကျူးကျော်နေထိုင်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အချိန်ကိုက်စီမံကိန်းများရေးဆွဲနိုင်မှု မရှိခြင်း၊ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ လူနေရပ်ကွက်များ၊ စီးပွားရေးဧရိ ယာများအတွင်း ကြဲပြန့်စွာ တည်ရှိနေခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိခြင်းကြောင့် မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်းအား နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းသွားရန် လိုအပ်ကြောင်း စာတမ်း ရှင်တစ်ဦးကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
ယင်းအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ Open Space ဧရိယာများကို ကျူးကျော်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားရန်၊ စနစ်ကျနမှု မရှိသည့် နေရာများ၊ ရပ်ကွက်များအား အိမ်ရာစီမံကိန်းများ အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြ ဆွေးနွေးမှုလည်း ရှိခဲ့သည်။
အလားတူ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စာတမ်းရှင်တစ်ဦးကလည်း နိုင်ငံခြားသား အမည်ပေါက်မြေများ၊ ကျူး ကျော်မြေများ၊ မီးလောင်မြေများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် အကျိုးရှိစွာ ဖော်ထုတ် သင့်ကြောင်းနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် အများပြည်သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပန်းခြံ၊ လမ်းတံတား၊ အိမ်ရာ စသည်တို့အား ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထား ရှိသင့်သည့် ဧရိယာများအား ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက် ဇုန်နယ်မြေများသတ်မှတ်၍ စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ထားရန်လည်း လိုအပ်သည်ဟု မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စာတမ်းရှင်တစ်ဦးက ဆွေးနွေးဖတ်ကြားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/19/20110အကြံပြုခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်မြောက်ရေး ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာ၁၃ရက်၊ မနက် ၉နာရီ က Sule Gallery houseမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလေး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ဦးမိုးသူ၊ဦးဇာဂနာ၊ဦးစိမ်းနီ၊ဦးမော်လင်း၊ ဦးဇင်ဝိုင်း၊ ဒါရိုက် တာမောင်မောင်ဦး (စနှိုးဝှိုက်)၊ လူမင်း၊ဝေဠုကျော်၊ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ အရိုင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးသူ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်လွင်၊ အတွင်းရေး မှူး ဦးဇာဂနာ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁)ဦးဇင်ဝိုင်း၊တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်ဆိုပြီး အတည်ပြုခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သမိုင်းဆိုင်ရာပြု လုပ်ဖို့ ဆပ်ကော်မတီ၊ဇာတ်ညွှန်း ကော်မတီ၊ သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာငွေ ရှာဖွေရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ၊ အယ်နီမေးရှင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကော်မတီစတဲ့ ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံကာ ကော်မတီအဖွဲ့များ အတည်ဖွဲ့တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် များအတွက် ရုံးခန်းကိုတော့ တော်ဝင်စင်တာမှာ အခန်းတစ်ခန်းယူပြီး ရုံးထိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း အဆိုပါရုံးခန်းမှာပဲ လုပ်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့တွေအပြင်၊ ရုံးအဖွဲ့သီးသန့်လည်း ထပ်ဖွဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာလည်း ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်တွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဇာတ်ကားအတွက် စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ စတူဒီယို တွေကို လေ့လာရေးခရီးထွက်ကြဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်နေ့မှာ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိကြောင်း၊ ရုံးဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ရုပ်အတွက် သရုပ်ဆောင်အသစ်များကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကနေ လျှောက်လွှာ များခေါ်ယူတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်ခင်ကြည်နေရာကိုလည်း သရုပ်ဆောင်သစ် ရှာမှာဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီအဖွဲ့မှပြန်ကြားရေး တာဝန်ယူထားသူ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူ သျှင်ကပြောပါတယ်။
“I MET A MAN FROM BURMA” will screen on Toronto ,Canada
I MetaMan from Burma will screen on
Dec 22, 2011 at the Revue Cinema,
400 Roncesvalles Avenue.
Synopsis: A Burmese refugee and self-coined freedom fighter, Ler Wah tells his life story and that of his country: From revolution, ethnic conflict, child soldiers, to loss, regret, and hope – this isatale ofaman from Burma (now Myanmar).
Ler Wah Lo Bo wasateacher and revolutionary fighter for the Karen National Liberation Army (KNLA) in Burma. In 2002, Lo Bo gained refugee status in Toronto, Canada—leaving his wife and children behind. Over the years, he has applied for his permanent residence but has been denied; the Canadian government has deemed his involvement with KNLA as unlawful.
I Met A Man From Burma successfully premiered last July in the Reel Causes program in affiliation with VIFF at The Vancouver International Film Centre and Tara Browne wasaguest on Urban Rush, Shaw TV to discuss the film.
(ကျောင်းသားများနေ့ ) အထိမ်းအမှတ်ပွဲဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်ဖိတ်ကြား
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်မှ ကျင်းပမည့် ဗိုလ်အောင်ကျော်ကျဆုံးသည့်နေ့ (ကျောင်းသားများနေ့ ) အထိမ်းအမှတ်ပွဲအား နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကျောင်းသားလူငယ်များအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့်နေ့ ရက် - ၂၀.၁၂.၂၀၁၁ (အင်္ဂါနေ့ )၊
ကျင်းပမည့်အချိန် - နံနက် (၈) နာရီမှ နေ့ လည် (၁၁) နာရီအထိ၊
ကျင်းပမည့်နေရာ - သမိုင်းမြို့ မပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ် (လမ်းညွှန် - သမိုင်းကုန်းကျော်တံတားအဆင်း ကိုတင်ဟန်မှတ်တိုင်အနီး)။
ရခိုင် ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေဖြင့် ရခိုင်တပြည်နယ်လုံး ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးရေး အတွက် လူပ်ရှားမူ ကော်မတီ တရပ်ကို ယမန်နေ့က တရားဝင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ရခိုင်က သဘာဝဓါတ်ငွေ့များကို ဤပိုက်လုံကြီးဖြင့် တရုတ်ကို တင်ပို့မည် ဖြစ်သည်။ (ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
ကော်မီတီကို အဖွဲ့ဝင် ၃၄ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး ဆပ်ကော်မီတီ အဖြစ် လုပ်ငန်းဦးစီးအဖွဲ့၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့၊ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့၊ ဥပဒေ အကြံပေး အဖွဲ့ တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
''ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အဓိက ရခိုင်က ထွက်တဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ရခိုင်တပြည်နယ်လုံး အတိုင်း အတာထိ လျှပ်မီး ၂၄နာရီ ရရှိဖို့ အတွက် လှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားတဲ့ နေရာမှာလည်း ကျနော်တို့က ဥပဒေဘောင်ထဲက လှုပ်ရှားသွားမှာပါ။ အခုလို ကျနော်တို့ လုပ်တာကလည်း တရားတယ်လို့ ကျနော် တို့ ယုံကြည်ပါတယ်''ဟု အဆိုပါအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူ ရတပပါတီဝင် လူငယ်တဦးက ပြောသည်။
ဒီဇင်္ဘာလ ၁၇ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ (ရတပ) ပါတီရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် ၎င်းကော်မီတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းဦးစီးအဖွဲ့တွင် ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးဦးလှစော၊ ဦးခိုင်ပြည်စိုး၊ ဦးဘိုးမင်း၊ ဦးတင်ဌေးတို့ ပါဝင် ကြပြီး တခြားကဏ္ဍများတွင် မြို့မိမြို့ဖများနှင့် လူငယ်များကို အဓိကထား ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရှိရသည်။
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး ကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း သူက ယခုကဲ့သို့ ဆက်ပြောသည်။
''ရခိုင်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီ ရရှိရေး ရခိုင်ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ အဓိက လိုလားချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဂတ်(စ်)တွေ အလျှံအပယ်ထွက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်သူတွေက ဖေါင်စီးရင်း ရေငတ် သူများပမာ နေကြရတယ်။ ရခိုင်က ထွက်တဲ့ သဘာဝ သယံဇာတတွေကို ကျနော် တို့ ရခိုင်ပြည်သူတွေက အထိုက်အသင့်ကတော့ ခံစားသင့်ပါတယ်။ ဒီအတွက် တောင်း ဆိုလှုပ်ရှားသွားဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ခုလို စီစဉ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။''
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနေသော အချိန်တွင် တနိုင်ငံလုံး တပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးမှာ အရေးကြီးကြောင်း အဆိုပါအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူ ရခိုင်အဆိုတော် ကိုတူတူမှ ပြောသည်။
''ကျွန်တော်တို့က ရွှေဂတ်(စ်)စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ဖို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒေသက ထွက်တဲ့ ဂတ်(စ်)ကနေ အကျိုးခံစားခွင့် နည်းနည်းလေးကိုပဲ တောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ကုလသမဂ္ဂက ပြန်ဌာန်းထားတဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်း သားတွေရဲ့ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ခံစားနိုင်အောင် တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စက တောင်းဆိုစရာတောင်လို တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။''
၎င်းပြင်သူက ''တကယ်ဆိုရင် ဒေသတစ်ခုမှာ စီမံကိန်း ကြီးကြီး မားမား လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်မယ့် ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ လည်းကောင်း၊ အဲဒီ ကုမ္ပဏီကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေက လုပ်ငန်းလုပ်မယ့် ဒေသတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ လုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်တွေကို နားလည်ထားရမယ့် သဘောရှိတယ်။ သဘာဓါတ်ငွေ့ တွေ များများထွက်တဲ့ဒေသမှာ လျှပ်စစ်မီး တစ်ယူနစ်ကို ၅၀၀ ကျပ်နီးပါးနဲ့ သုံးနေရတာဟာ သဘာဝမကျဘူး ဆိုတာ အကုန်လုံးသိကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ဆီ ချီတက်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာ တစ်ပြည်လုံး တပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်မီးသာ ရရှိခဲ့ရင် နိုင်ငံတော်သမတကြီးရဲ့ဆင်းရဲမွဲတည်မူ ပပျောက်ရေးတို့ လျော့ချရေးတို့ကို အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
ယခုအဖွဲ့အနေဖြင့် ရခိုင်တပြည်နယ်လုံး ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် အရှိန်မြင့် လှုပ်ရှားသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်္ဘာလ ၁၉ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးတွင် ယာယီ ကော်မီတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ အတည်ပြု ဖွဲစည်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်က ထွက်သော သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ဖြင့် ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး အတွက် လူထု လူပ်ရှားမူများ ပေါ်ပေါက်နေပြီး မြို့အတော်များများတွင် ပိုစတာ စာရွက်များ ကပ်၍၎င်း၊ တီရှပ် အကျီ်များ ၀တ်ဆင်၍၎င်း လူပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
၎င်း လူပ်ရှားမူများကို အာဏာပိုင်များက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။
သူတို့နဲ့မီဒီယာတွေ တွေ့တာက အခုနေအခါမှာ ဖက်ရှင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတယ်။ အရင်ကတော့ မီဒီယာဆိုတာ “သွေးခွဲ၊ ရန်တိုက်ပေးနေသူ/လေလှိုင်းသံလူသတ်သမား နားမယောင်လေနဲ့သတိထား”တဲ့ ၊ “မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့တိုက်ရမယ်”လို့ ဆိုခဲ့တာပဲ။
အခုတော့ သူတို့နဲ့ မီဒီယာတွေ ရောင်းသူဝယ်သူချင်းမို့ အသံတူတာလား၊ ရင်ကြားစေ့တယ်လို့ပြောရမလား၊ ပြန်ပေါင်းထုပ် နေကြပြီလို့ပြောရမလားမသိဘူး။
သူတို့ကမီဒီယာတွေကိုအသုံးချနေတာလား၊ မီဒီယာတွေကပဲ ကျေကျေနပ်နပ်အသုံးတော်ခံနေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့နဲ့ မီဒီယာတွေ အပြန်အလှန်သူ့အကျိုးကိုယ့်အကျိုး (win – win situation) ဖြစ်နေကြတာလား။
သူတို့ ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့၊ ဘာစကားတွေပဲပြောပြော၊ သူတို့အားလုံး“တစ်သွေး၊ တစ်သံ၊ တစ်မိန့်” ယိမ်းကသလို ပြောတဲ့ စကားကတော့ “(၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ၊ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ၊ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်” ထဲမှာ ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ “မည်သူ့သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုမှမခံဘဲ လွတ်လွတ် လပ်လပ်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမယ်”လို့ပြောသွားသတဲ့။
ဟုတ်တာပေါ့။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(တင်အေးကော်မရှင်) ကို ရုံးတစ်ရုံးဓါးတစ်စင်း ဆိုတဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်အာဏာတွေပေးထားတာပဲ။ ဒီတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတိုင်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောတာ ဘာမှ မဆန်းပါဘူး။ “(၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ” ကို သူတို့စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲ၊ အတည်ပြု၊ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြတာပဲလေ။
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီမှန်သမျှရဲ့ကံကြမ္မာ၊ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ကံကြမ္မာ၊ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ ဟာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။“တင်အေးကော်မရှင်”က သေဆိုသေ၊ ရှင်ဆိုရှင်၊ တည်ဆိုတည် ၊ ပျက်ဆိုပျက်ရမှာပါ။
“တင်အေးကော်မရှင်”ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှ အပြီးအပြတ်နဲ့အတည်ဖြစ်စေရမယ်။ ဘယ်တရားရုံးမှာမျှ တရားစွဲလို့မရပါဘူး။
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီမှန်သမျှရဲ့ကံကြမ္မာ၊ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ကံကြမ္မာ၊ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခံရသူတွေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် “တင်အေးကော်မရှင်”ဟာ တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်အာဏာတွေနဲ့ မြွေပွေးမြွေဟောက်လို အဆိပ်ပြင်းသလောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကစေလွှတ်တဲ့ စစ်သားအမတ်ဆိုသူတွေအပေါ်မှာတော့ ရေမြွေလိုမြက်လျှောလို့ အဆိပ်မရှိနိုင်ရှာပါဘူး။
“တင်အေးကော်မရှင်”အနေနဲ့ “ မည်သူ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှမခံဘဲ လွတ်လွတ် လပ်လပ်လုပ်ဆောင်နေတယ်” လို့ ဘယ်လိုပဲပြော နေပါစေ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သူ့စစ်သားအမတ်တွေကို ဘောလုံးပွဲလူလဲသလို စိတ်ကြိုက်လဲလှယ်ခွင့်ပေးထားရပါတယ်။ ငြင်းပယ် ခွင့်မရှိပါဘူး။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စစ်သား အမတ်တွေကို သူ့စိတ်ကြိုက်အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့တာ (၅) ကြိမ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ စုစုပေါင်း (၆) ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်က အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဝန်ခံထားပါတယ်။
“တင်အေးကော်မရှင်” ရဲ့အထက်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်။
“တင်အေးကော်မရှင်”ဟာ စစ်သားအမတ်တွေရဲ့ကံကြမ္မာကို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူ တွေရဲ့ ကံကြမ္မာကို စေစားနိုင်သလို “ဘယ်သူ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှမခံဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်” စေစားပိုင်ခွင့်/နိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာ စစ်တပ်အလိုကျပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို အထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဟာ ယခင်က (နအဖ) စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဖြစ်ပြီး၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ စစ်သားအမတ်တွေ အပေါ်သြဇာညောင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါလား။
ဒီတော့ဗျာ။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(တင်အေးကော်မရှင်)ဆိုတာ နိုင်ငံရေးပါတီမှန်သမျှရဲ့ ကံကြမ္မာ၊ ရွေးကောက် ပွဲရဲ့ကံကြမ္မာ၊ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကို စိတ်ကြိုက်ချုပ်ကိုင်စေစားဖို့ တစ်ဖက်သတ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရေး ယန္တယားတစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီမှန်သမျှလို့ဆိုပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ (USDP) မပါဘူးဆိုတာကိုတော့ အားလုံးက အလိုအလျောက် သဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
မည်သူမဆို၊ မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီမဆို “(၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ၊ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ၊ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်” ထဲ ဝင်ရောက်သွားပြီဆိုရင် “တင်အေးကော်မရှင်”က ဆုံးဖြတ်တာကို လေးစားလိုက်နာရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။
- ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကြေညာချက်အမှတ် (၄၅/၂၀၁၁) - ၁၇ သြဂုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
- ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကြေညာချက်အမှတ် (၄၆/၂၀၁၁) – ၁၇ သြဂုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
- ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကြေညာချက်အမှတ် (၅၆/၂၀၁၁) – ၂၁ အောက်တိုဘာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
- ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကြေညာချက်အမှတ် (၅၇/၂၀၁၁) – ၂၅ အောက်တိုဘာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
- ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကြေညာချက်အမှတ် (၆၀/၂၀၁၁) – ၁၇ ဒီဇင်ဘာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
ကင်မ်ဂျုံအီအထ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ရေးသားခဲ့သူ စာရေးဆရာ ဟိန်းလတ်နှင့် မေမြန်းချက်
Published on December 19, 2011 by နေသွင်
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ၁၅ နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကင်မ်ဂျုံအီ အသက် ၆၉ နှစ်ဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံသွားတဲ့အကြောင်း အစိုးရမီဒီယာက ဒီကနေ့ အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ကင်မ်ဂျုံအီဟာ မြန်မာပြည်မှာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်းက တောင်ကိုရီယားအရာရှိ ၁၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးပေါက်မှုကို အမိန့်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီး အဲဒီ အဖြစ်အပျက်​ ​နောက်ပိုင်း မြန်မာက မြောက်ကိုရီးယားကို သံတမန် ဆက်ဆံရေး ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးခင်နှစ်တွေ ​ အတွင်းမှာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး​ ​ပြန်စခဲ့ပြီး​ ​မြောက်ကိုရီးယားက မြန်မာစစ်အစိုးရကို နျူးကလီးယားနဲ့​ ​လက်နက်နည်းပညာတွေ၊​ ​မြေ​အောက်လိုဏ်ခေါင်း နည်းပညာတွေ ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာလည်း ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေမှာ ခေါင်းကြီး သတင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန် သမ္မတဘုရှ် အစိုးရလက်ထက်က မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေရဲ့ ခြေကုပ်စခန်း (Outposts of tyranny) ၆ စာရင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ကန့်ကွက်မှုတွေကို အာခံပြီး မြန်မာပြည်နဲ့ လျှို့ဝှက် ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအီ အကြောင်း မြန်မာဘာသာနဲ့ “ကင်မ်ဂျုံအီ သို့မဟုတ် မြောက်ကိုရီယား၏ ချစ်လှစွာသောခေါင်းဆောင်ကြီး” စာအုပ်ရေးသားခဲ့သူ စာရေးဆရာ ဟိန်းလတ်ကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကင်မ်ဂျုံအီက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။ ဒီစာအုပ်ကို ဆရာဘာသာပြန်တာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြန်တာလဲ။
“ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ စာအုပ် ၂၀ လောက်ကို ဖတ်တယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ မြင်တဲ့ဟာကို ကျနော်ရေးတယ်။ ကျနော်က နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ အကြောင်းကို အများကြီးရေးတာကို။ ကင်မ်ဂျုံအီကို အနောက်အုပ်စု အများစုက၊ ကမ္ဘာတော်တော်များများက အယူသီးတဲ့ တဖက်စွန်းရောက်တဲ့သူ အနေနဲ့ အဲလိုစွပ်စွဲနေတဲ့ကာလမှာ သူမြောက်ကိုရီးယား အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးလဲ။ နောက် သူ့ရဲ့ ကောင်းကွက်တချို့နဲ့ သူ့ရဲ့အားနည်းချက် တချို့ကို တင်ပြရင်တော့ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရေးကို လေ့လာနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်၊ လူငယ်တွေအတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ ထင်လို့ရေးတာပါ။”
“ကင်မ်ဂျုံအီက သူ့ဖခင် ကင်မ်ယူအီစုန်းရဲ့ အရိုက်အရာကို ခံစားဆက်ခံတယ်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒီနေ့ချိန်ထိ မကောင်းသေးဘူး။ သို့သော် သူ့နိုင်ငံတည်မြဲရေးကတော့ ကောင်းကောင်း ဦးဆောင်ခဲ့တာ။ ပြည်သူအများစုကတော့ ခေါင်းဆောင်အစစ်အမှန်လို့ပဲ ယုံကြည်တယ်။ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ စေ့စပ်ဖို့ကိစ္စတွေ အားလုံးမှာလည်း သူ့အဆုံးအဖြတ်က တခါတလေ မှားချင်မှားမယ်၊ မှန်ချင်မှန်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ပြည်သူ တရပ်လုံးက သူ့နောက်က တညီတညွတ်တည်း လိုက်ကြတယ်။ အဲဒီနေရာတွေမှာတော့ သူစည်းရုံးရေးကောင်းတယ်ပေါ့။ တဘက်က ကြည့်ရင်တော့ မလွတ်တော့ မလွတ်လပ်တဲ့ စနစ်ဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် နျူကလီးယား စမ်းသပ်တာ အားလုံးသိတဲ့​ အတိုင်းပဲ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်လောက်တုန်းက စစမ်းတယ်။ သဘောအရ နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုကို ဟန်ပြလုပ်ပြီး သံတမန်နည်းအရ အသာရအောင် လုပ်လိုက်တဲ့သဘော။ အဲဒါကို သူ့ပြည်သူက နည်းနည်း နားလည်တယ်။ အပြင်ကလူတွေကတော့ သိပ်လက်မခံကြဘူးပေါ့။ အဲဒီအပိုင်း ရှိတယ်။ နောက် စီးပွားရေး​ ပုံစံအရတော့ ပိတ်ထားတယ်။ သူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ စားဝတ်နေရေးက အစ ခက်ခဲတယ်။ အာဏာရှင်ဆန်တယ်။ လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့နေရာမှာ Transparency မရှိဘူးပေါ့။ သံခင်း တမန်ခင်း မဟာဗျူဟာတွေကို ကင်မ်ဂျုံအီကတော့ ခေါင်းမာနေတယ်။ သူ့ဘက်က​ ​ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု မရှိတဲ့အတွက် လက်ရှိ ၆ နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကြီးက ခုထက်ထိ မအောင်မြင်ဘူး။ ဒါတွေကတော့ တပါတီ အာဏာရှင်စနစ် အောက်မှာတော့ မထူးပါဘူး။ ဒီလိုပုံစံတွေပါပဲ။”
သူက စစ်တပ်အားနဲ့ ထိန်းထားတာလား။ တကယ်ပဲ သူ့အပေါ်မှာ​ ​ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည် ရှိကြသလား ဆိုတာ။ အဲဒါကို ဆရာလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်လိုတွေ့ရလဲ။
“ကျနော်တော့ ၂ မျိုးလုံး တွေ့ရတယ်။ စစ်တပ်အားကလည်း ကျိန်းသေပါတယ်။ သူတို့တွေက တိုင်းပြည်ကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် အုပ်ချုပ်တာ။ ဒါပေမယ့် တပိုင်း။ အဲဒါလည်း သူတို့က လွတ်လပ်ရေး အစီအစဉ်မှာ ခေါင်းဆောင် ၂ ယောက်ပဲ ရှိတယ်လေ။ ကင်မ်ယူအီစုန်းနဲ့ ကင်မ်ဂျုံအီ ၂ ယောက်ပဲရှိတယ်။ ကင်မ်ဂျုံအီက အရိုက်အရာကို ဆက်ခံပြီးတော့ ကင်မ်ယူအီစုန်း လမ်းစဉ်ကို လိုက်ပြီး လုပ်တယ် ထင်တဲ့အတွက်လည်း ပြည်သူအများစုက လက်နက်အင်အား စစ်တပ်အင်အား မပါပေမယ့်လည်း ထောက်ခံကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တချို့သိတယ်။ တောင်ကိုရီးယားက စီးပွားရေးအင်အား အရမ်းထွန်းကားနေပြီ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အလယ်မှာလည်း တင့်တယ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် အများစုက လက်ရှိ ပေါင်းစည်းရေးကို မလုပ်ချင်ကြတဲ့ သဘောတွေ ရှိနေတာလည်း သူတို့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားကို နာယူချင်တဲ့သဘောတွေ တွေ့ရပါတယ်။ တချိန်ချိန်ကျရင် နောက်ခေါင်းဆောင် တယောက်က ပြောင်းလဲရေး လုပ်ပြနိုင်ရင်တော့ ဖြစ်တာပေါ့။ တရုတ်ပြည်မှာ မော်စီတုန်းလက်ထက်နဲ့ တိန့်ရှောင်ဖိန်လက်ထက်၊ ကွာသွားသလို၊ အဲလိုလုပ်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့တော့ မရှိဘူးပေါ့။”
ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေမှာ ပြောလို့ရှိရင် အဆိုးဆုံး​ နိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာပါတယ်။​ ​မြောက်ကိုရီးယားပါတယ်။ ဇင်ဘာဘွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေကကော အခု အစိုးရသစ်တွေဘာတွေ ပြောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယားကနေ ဘာတွေများ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်တာရှိမလဲ။
“မြောက်ကိုရီးယားက ခုထိ ကင်မ်ဂျုံအီ ဘ၀ထဲမှာပဲ သောင်တင်နေတယ်။ ကျနော်တို့ဆီက ပြောင်းစပြုပြီပေါ့။ ဒါခုနက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လည်း ပြောနေတာပဲ။ အဲတော့ မတူတာတွေကို ခဏဘေးဖယ်ထားပါ။ တူတာတွေကို လုပ်ခွင့်ရသမျှ လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ လုပ်မယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့။ အဲလို ညီညွတ်ရေး တချို့ရတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားလောက်တော့ မဆိုးဘူး။ ရလဒ်က အမြန်ဖြစ်မလား။ နည်းနည်းကြာမလား ဆိုတာပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။ လမ်းကတော့ စပွင့်ပြီ၊ စဖွင့်ပြီပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လက်ရှိအနေအရတော့ အကောင်းမြင်ရှုရမှာပဲ။ အစိုးရသစ် ၈ လ၊ ၉ လ အဲဒီအချိန်နဲ့ အရင် အခြေအနေနဲ့တော့ ကွာသွားပြီ။ အရင်က ဒီလောက်တောင်မှ မဖြစ်တာ။ အဲတော့ ကင်မ်ဂျူံအီလောက်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားလောက်နဲ့တော့ ကျနော်တို့ အခြေအနေက မတူတော့ပါဘူး။”
လက်ရှိ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရဲ့ အစ်ကို ပြည်ပရောက် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က နီပေါ နိုင်ငံကို အသွား၊ မြန်မာပြည်ကို ၀င်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်သူတွေ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာက ဖေါ်ပြပါတယ်။
ချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ် နိုင်ငံရေး သိပ္ပံဌာန ကထိက ပါနီတန် ကတော့ ယင်လပ် အစိုးရရဲ့ မြန်မာပြည် ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းတွေ ကနေ ရရှိလာမယ့် အကျိုးအမြတ်တွေကို ပြည်သူတွေ မခံစားရဘဲ၊ သက်ဆင်ရဲ့ စီးပွားရေး အပေါင်းပါတွေ ကသာ လက်ဝါးကြီးအုပ် ရယူသွားမှာကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ သက်ဆင် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့စဉ် ၂၀၀၁ နဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွေတုန်း ကလည်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်နဲ့ သတင်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ကနေ အကျိုးအမြတ်တွေ ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း၊ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီက ပစ္စည်း တွေက်ို မြန်မာ စစ်အစိုးရ ၀ယ်ယူနိုင်အောင် ထိုင်း ဘတ်ငွေ သန်းပေါင်း တစ်ထောင် ချေးငှားဖို့ ထိုင်း သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်ဘဏ် ကို အမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း ကထိက ပါနီတန်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေ ကလည်း မြန်မာ ကနေ ထိုင်း ကို ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်း ဖေါက်လုပ်ရာမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တာမို့ အထူး စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
ကိုဝိုင်း | တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၅ မိနစ်
ဒဲရက်မစ်ချယ် - မြန်မာဆိုင်ရာမူဝါဒ ကင်းထောက်
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၂၆ မိနစ်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒဲရက်မစ်ချယ် သည် မြန်မာအစိုးရ အရာရှိများနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့သည်များကို ပေကျင်းမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး၌ အင်္ဂါနေ့က တရုတ်အစိုးရ အရာရှိများကို သူ၏ခရီးစဉ်အပြီး ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် မြန်မာအစိုးရသစ်၏ မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများအပေါ် အမေရိကန်အစိုးရ၏ အမြင်၊ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကိစ္စများ၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု အရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့
အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများ ပါဝင်သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် အဆိုပါ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို အနည်းငယ်ကို တည်းဖြတ်တင်ဆက် ထားပါသည်။
ဒဲရက်မစ်ချယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်မူ ညှိဝါဒနှိုင်းရေးမှူး၊ ဓါတ်ပုံ-မဇ္ဈိမ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်အပြီးမှာ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တစုံတရာ ပြောင်းလဲသွားပြီလို့ ယုံကြည်ယူဆ မှုတွေရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြား
ရေး မူဝါဒမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘယ်လိုအခန်း ကဏ္ဍက ဆက်ရှိနေမှာပါလဲ။
"ဆက်ဆံရေးကတော့ ဆက်ပြီးတိုးတက်နေမှာပါ။ သူတို့က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေသမျှ အမေရိကန်ကလည်း အထောက်အပံ့တွေ ပေးနေမှာပါ၊ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ လက်တွဲဆောင်ရွက်နေမှာပါ။"
"နိုင်ငံခြားရေးဝနကြီးနဲ့ သွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် အပါအဝင် ဒီနိုင်ငံကို လေးကြိမ် သွားခဲ့ပါပြီ။ တကြိမ်သွားပြီးတိုင်း၊ သွားပြီးတိုင်း ကျနော်တို့ကြားမှာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် နိုင်ခဲ့တယ်၊ အဆက်အသွယ်တွေ တည်ဆောက်နိုင် ခဲ့တယ်၊ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံး၊လေး လအတွင်း ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်နဲနဲ ပိုတဲ့အချိန်အတွင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ ငါးကြိမ်တွေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီးအတွက် မရှိရင်မဖြစ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတရပ်ပါ။ နိုင်ငံတွင်းမူဝါဒများနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတာကြောင့် ခုလို ဒီအဖွဲ့ကြီးနဲ့ကြာရှည်ကြာများ ကင်းကွာနေရတာပါ။"
"မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးမှာ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ ဘယ်လို သြဇာ သက်ရောက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ အမေရိကန်မှာ ရည်ရွယ်ချက်မျိုး မရှိပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံကိုမှ ထိခိုက်ပြီး ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ သူ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ တင်းမာတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိနေ တာဟာလည်း အမေရိကန်အတွက် အကျိုးမရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းနေမှ
ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်း ကွဲပြားမနေဘဲ ချဉ်းကပ် မှုတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး
တော့ အတူတကွ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလုပ်ကိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။"
"ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ၊ တရုတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွေဟာ ရှည်လျားတဲ့ နယ်နိမိတ်ရှိပြီး ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်း လည်း ရှိကြပါတယ်။ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတခုကို နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ ပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မရှိပါဘူး။ ဒါမျိုး အရင်တုံးကမလုပ်ခဲ့သလို နောက်လည်း လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။"
ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ခင်ဗျားတို့ အစိုးရိမ်ဆုံး အချက်ကဘာလဲဗျ။
"အကြီးမားဆုံး စိုးရိမ်စရာက ကျနော်ထင်တာ စိန်ခေါ်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာပဲ၊ အနှစ်သာရအရ ပြောရရင် မြန်မာ
နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်း သား လူနည်းစုတွေအကြား၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေနဲ့ ဗဟိုအစိုးရကြား၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေနဲ့ လူများစု မြန်မာလူမျိုးတွေအကြား ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အဖြေရှာနိုင်ဖို့ တိုင်းပြည်မှာ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်နေတာပါ။ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်တော့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးကတည်းက တောက်လျှောက် ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ
အကြီးမားဆုံး စိုးရိမ်စရာ အချက်ကြီး ဖြစ်ပြီးတော့ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့၊ ရေရှည်ဖြစ်ထွန်း တိုးတက်ဖို့၊ မုချဖြေရှင်းရမယ့် အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။"
"လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းရင် အတုအယောင် တည်ငြိမ်မှုကိုပဲ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်
ရေရှည်ခံမယ့် တည်ငြိမ်မှုဆိုတာ ရင်ကြားစေ့ရေး နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်းနဲ့ စိတ်စေတနာကောင်းတွေ နှစ်ဘက်လုံးမှာ ရှိမှဖြစ်မှာပါ။ ခုတော့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ရှည်ကြာခဲ့တဲ့ မယုံကြည်နိုင်မှုတွေဟာ စိတ်မကောင်းစရာဘဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရှိနေပါတယ်။"
"ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ အခုမှ တကယ့်ကိုအစပဲ အစပျိုးကာစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်လာမယ့်
ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပါတီကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပေးတာမျိုးလို ဖွင့်ပေးတာလေး
တွေ အပြောင်းအလဲ လုပ်တာလေးတွေကိုပဲ ကျနော်တို့ နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်မိပါတယ်။ လွှတ်တော်နဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတွေက သူတို့လွှတ်တော်တွေကို ခိုင်ခံ့တဲ့ စနစ်တရပ် အဆောက်အအုံ တရပ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်နေတယ် လို့ ပြောနေပါတယ်။ နောင်မှာ အချေအတင် ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ မူဝါဒချမှတ်ရာမှာ အစပျိုး လုပ်ဆောင်တာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစနစ်ဟာ တကယ့်ကို အစပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုမျိုးလဲ သူတို့မှာရှိပါတယ်။"
မြန်မာ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူ ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာအောင် အမေရိကန်က ဘယ်လိုလုပ်သွားမှာပါလဲ ခင်ဗျ။ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိကန်ကို ဖိတ်တာမျိုးလုပ်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒေသတွင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံကို ဖိတ်ခေါ်မှာ လား။
"ကျနော်တို့မြန်မာသမ္မတကြီးကို အမေရိကန်လာဖို့ မဖိတ်သေးပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကိုတော့ အာရှရေးရာ
တွေ ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတခြား နိုင်ငံပေါင်းများစွာနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်နေသလိုပဲ ဒေသတွင်း အတွေး အမြင်တွေ ဖလှယ်ဖို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးတာ အမြင်တွေရှုထောင့်တွေ ရှာဖွေတာစတဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်း
တွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ နားလည်မှုဆိုတာ အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘယ်က ဘယ်လိုဆင်းသက်လာတယ် ဆိုတာကို သူတို့သေသေချာချာ သိပါ့မလားလို့ ကျနော်သံသယ ဖြစ်မိပါ တယ်။"
"မြန်မာသမ္မတကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကျနော်တို့ မဖိတ်ကြားရသေးပါဘူး။
ဒေသတွင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ အခု ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ စစ်တပ်ချင်း ဆက်ဆံရေးမှာ ကျနော်တို့အတွက် အကန့်အသတ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားမေးတဲ့ ဒုတိယအချက်ကလည်း ဘာမှလုပ်
By featured, ဧရာဝတီ on December 19, 2011 2:42 pm
ရွှေည၀ါ ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ အား နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က အရေးယူမည့်စာ ပို့သော သတင်းနှင့် ပတ် သက်ပြီး ပြည်တွင်း သတင်း ဂျာနယ်များတွင်ဖော်ပြခွင့်မရကြောင်း သတင်း မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောသည်။
“စာပေစိစစ်ရေးက အဲဒီသတင်းကိုလုံးဝ မဖော်ပြဖို့ တားတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖော်ပြရင်တော့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ရ လိမ့်မယ်လို့ ပြောတယ်”ဟု သတင်းဂျာနယ် တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာတဦး က ပြောပြသည်။
ယင်းသတင်းသည် ပြည်သူအများက စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာ အများစုက ဖော်ပြရန် ကြိုးစားကြသော် လည်း စိစစ်ရေးက ခွင့်မပြုကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ တဦးကလည်း“ဆရာတော် ကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားသတင်းတွေ ကျနော်တို့ ရေးပြီး တင် ဖူးတယ်၊ မပေးဘူး၊ ညွှန်ကြားထားတာမျိုးတော့ မရှိဘူး၊ သွားတင်တော့မှ မပေးတာ၊ ဆရာတော် ဘွဲ့အမည်ပါရင်ကို စိစစ်ရေးက အရင်ကတည်းက ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး၊ တခြားဟာတွေ ခွင့်ပြုတာတော့ ရှိတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယကအဖွဲ့(မဟန)၏ ၄၇ ပါးစုံညီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် အကြောင်းကြား စာ ကို ရွှေည၀ါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ ထံ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မဟန ၏ စာတွင် တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည်ကို မလိုက်နာဘဲ တရားဟောခဲ့သောကြောင့် လက်ရှိ သီတင်း သုံးနေသော ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်ရှိ သာဓုကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားရန်၊ ဆုံးမညွှန်ကြားမှုကို မနာခံ၍ ဒုဗ္ဗစ ပုဂ္ဂိုလ်(သံဃာအဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးမမှုကို မနာခံသူ)အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်နှင့် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သာဓုကျောင်း အတွင်း မည်သည့်သင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန်တို့ ပါဝင်သည်။
တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ထား၍ မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ရုံးတွင် သြ၀ါဒ ဆုံးမစကားကိုသာ ပြောခဲ့ခြင်း ကို တရားဟောပါသည်ဟု မန္တလေးတိုင်း သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့(မဟန)သို့ မှားယွင်းစွာတင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရွှေည၀ါ ဆရာတော်က ဧရာဝတီသို့ မိန့်ကြားထားသည်။
မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)ရုံး၌၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပစဉ် ရွှေည၀ါ ဆရာတော်က သြ၀ါဒ ဆုံးမစကား ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ကျင်းပသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆုရရှိခြင်း နှစ် ၂၀ ပြည့် အခမ်းအနားနှင့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အခမ်းအနား များကိုလည်း သာဓု ကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပခွင့်ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို အရေးယူသော သတင်းသည် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ ရဟန်း သံဃာများ၊ ပြည်သူများထံသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး အများစုက စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ဆရာတော်အတွက် အရမ်းကို စိတ်ပူတယ်။ ဆရာတော်ကတော့ သူ့အတွက် မပူဖို့ အမြဲပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာတော်လို သီလ၊ သမာဓိပြည့်စုံတဲ့ ရဟန်းတော် တပါး ဒုက္ခကြုံမှာကို မလိုလား ပါဘူး”ဟု ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ရွာမပရိယတ္တိစာသင် တိုက်မှ စာသင်သား ရဟန်းပျိုတဦးက ပြောသည်။
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်က ၎င်းအား အရေးယူမှုကို ပြင်ဆင်ပေးရန်အတွက် ရဟန်းနှင့်ပြည်သူ တသောင်းကျော်၏ လက်မှတ်များနှင့် အသနားခံစာကို နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယကအဖွဲ့သို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်က တင်ပြထားသည်။
ထို ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ သတင်းသာမက အစိုးရအရာရှိကြီးများ၏ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများအား စုံစမ်း ရေးသားထားသော သတင်းများကိုလည်း သတင်းမီဒီယာများတွင် စာပေစိစစ်ရေးက ဖော်ပြခွင့်မပြုဘဲ ဖြုတ်ပယ်သည်ဟုလည်း ရန်ကုန် သတင်း မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောဆိုကြသည်။
ဂျာနယ် သတင်းထောက် တဦးက“သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောပါ၊ လက်တွေ့မှာတကယ်မရဘူး။ သတင်းတွေကို ဖြတ်တောက်တယ်။ စိစစ်တယ်။ မနာခံရင် အရေးယူမယ့်ပုံစံပြတယ်”ဟု ပြောသည်။
ကင်ဂျုံအီးလ် အလွန် မြန်မာ- မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး
By featured, လင်းသန့် on December 19, 2011 6:36 pm
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီးလ် ကွယ်လွန်သွားသည့် သတင်းကို မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ သတင်းဌာနက တရား ၀င် ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာ တုံ့ပြန်မှုများရှိနေခဲ့သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ် တည်ငြိမ်မှုနှင့် အမေရိကန်၏ မဟာမိတ်များ လုံခြုံရေးအတွက် အလေးပေး လုပ်ဆောင်စရာများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ယနေ့ ပြောဆိုလိုက်သည်။
တရုတ်အစိုးရကလည်း ယခုကဲ့သို့ အာဏာရှင် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း ပြောဆိုသည်။
နျူကလီးယား လက်နက် ပိုင်ဆိုင်သော မြောက်ကိုရီးယားနှင့် သံတမန်ရေးရာ အဆက်အသွယ်ရှိသည့် မြန်မာပြည်တွင်း၌လည်း ကင်ဂျုံအီးလ် သေဆုံးသည့် သတင်းကို အမျိုးမျိုး တုံ့ပြန် ပြောဆိုနေကြသည်။
ကင်ဂျုံအီးလ် ကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက် အာရှတိုက်၏လုံခြုံရေးကို ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရုံးအဖွဲ့မှူး ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။
“အာရှရဲ့လုံခြုံရေးအထိပါ ဂယက်ရိုက်နိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့က ယူဆတယ်”ဟု ဦးဝင်းထိန်က ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
ယခင်စစ်အစိုးရက မြောက်ကိုရီးယားနှင့် စစ်ရေးအရ လျှို့ဝှက် ဆက်ဆံမှုများ ရှိခဲ့သည့်အပေါ် နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခု အစိုးရအနေဖြင့် ကင်ဂျုံအီးလ် လွန် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ခန့်မှန်းရ ခက်ခဲကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး မြောက်ကိုရီးယား သံအမတ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ သခင်ချန်ထွန်းက မြန်မာနှင့် မြောက် ကိုရီးယား သည် ယခင်က နိုင်ငံရေးအရ ဆက်ဆံမှုသာရှိကြောင်း၊ အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးခွဲမှု နောက်ပိုင်း မြန်မာဘက်က မြောက် ကိုရီုးယားနှင့် သံတမန်ဖြတ်တောက်ခဲ့ကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယား ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတင်းများကြောင့် မြန်မာ စစ်အစိုးရ လက်ထက်က နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးကျည် နည်းပညာရယူလို၍ တိတ်တဆိတ် ပြန်လည်ဆက်သွယ်သည်ဟု သတင်းများ ကြား ရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“နောက်ပိုင်းလည်း သံတမန်ဆက်ဆံရေးအနေနဲ့ မြန်မာက ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ မြန်မာက ဘက်မလိုက် နိုင်ငံခြားရေးမူကို ကျင့်သုံး တော့ အမေရိကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တရုတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြောက်ကိုရီးယားပဲ ဖြစ်ဖြစ် သံရေး တမန်ရေးဆက်ဆံမှုက ဒီ အတိုင်းဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်”ဟု သခင်ချန်ထွန်းက ဆိုသည်။
မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် သံအမတ်ခန့်အပ်၍ ၂ နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို စတင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သော တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ချန်ဒူးဝမ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို မြောက် ကိုရီး ယားမှ စေလွှတ်သည့် အထူးကွန်မန်ဒို ၃ ဦးက ဗုံးခွဲ လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ရာတွင် တောင်ကိုရီးယား ၀န်ကြီး ၄ ဦး အပါအ၀င် တာဝန် ရှိသူ ၁၇ ဦး နှင့် မြန်မာအစိုးရ အရာရှိများ စုစုပေါင်း ၂၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် သံတမန် အဆက်အသွယ်ကို မြန်မာဘက်က ဖြတ်တောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွင် သမ္မတ ချန်ဒူးဝမ် အသက် မသေဘဲ လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။
မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယားသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ သံတမန် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည် စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြောက် ကိုရီးယား သံရုံးကို ဖွင့်ခဲ့သည်။
သံတမန် ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်သည့် ကာလအတွင်း ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် လျှို့ဝှက် ဆက်သွယ်မှုများ ရှိခဲ့ သည်။ မြန်မာက မြောက်ကိုရီးယားထံမှ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းအကူအညီနှင့် နည်းပညာရယူလိုသောကြောင့် ယင်းသို့ ဆက်သွယ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်း မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပတ်ခ်ဝေချွန်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး သံတမန် ဆက်ဆံရေး ပိုမို တိုးမြှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြန်လည် စတင်ပြီးနောက်ပိုင်း ကင်ဂျုံအီးလ် ၏ မွေးနေ့ အထူးသတင်းများ၊ မြောက် ကိုရီးယား သံရုံး၏ သတင်းများကို မြန်မာစစ်အစိုးရက သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြောက်ကိုရီးယားသို့ လျှို့ဝှက်သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် သတင်း ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်တွင် မြောက်ကိုရီးယား စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ကင်မ်ကျုတ်ဆစ် (Kim Kyok-sik)နှင့် နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှု စာချွန်လွှာ ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရန် သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ရေဒါနှင့် ကြားဖြတ်ပိတ်ဆို့မှုဌာနများ၊ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး တပ်များ၊ လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များ၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်အမိန့်ပေး ဌာနများသို့လည်း သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သည့်အပြင် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း အတွင်းရှိ အဆောက်အဦးများတွင် ထုတ်လုပ်နေသည့် မြေပြင်မှ မြေပြင်ပစ် စကဒ် (SCUD) ဒုံးကျည် စက်ရုံများသို့ သွားရောက်၍ လေ့လာကြသေးကြောင်း လည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
မြန်မာ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် တဦးအနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၂ နိုင်ငံ စစ်တပ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးများ လုပ်ဆောင်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရ ဦးရွှေမန်း က မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်က မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတချို့ ရန်ကုန် သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းသို့ကပ်ခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားမှ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ တိတ်တဆိတ် ၀ယ်ယူခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီ လများအတွင်းကလည်း တားမြစ်ထားသည့် လက်နက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာသည်ဟု သံသယ ဖြစ် ဖွယ် မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘော ၂ စီးကို အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောများက ပြန်လှည့်သွားစေခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်က မြောက်ကိုရီးယားသည် နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်ခဲ့သည့် အတွက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၈၇၄ ကို ချမှတ်ပြီး အရေးယူခဲ့သည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အရ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရှိသော မြောက်ကိုရီးယား၏ မည်သည့် သင်္ဘော၊ လေယာဉ်များကိုမဆို နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက် စစ်ဆေးပိုင်ခွင့် ရှိမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မကွေးတိုင်း အနောက်ခြမ်း မလွန်ဒေသနှင့် အလယ်ပိုင်း သပိတ်ကျင်းဒေသတို့ရှိ အမည်မသိစက်ရုံတွင် မြောက် ကိုရီးယား ပညာရှင်များနှင့် မြန်မာ စစ်တပ်တို့ လျှို့ဝှက် စီမံကိန်းများလုပ်ဆောင်နေသည်ဟူ၍လည်း သတင်း များ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယား ပူးပေါင်း လျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်နေသည့် နျူကလီးယား ရည်မှန်းချက်များကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်က မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိဟောင်း ဗိုလ်မှူးဟောင်း စိုင်းသိန်းဝင်းကလည်း ဖွင့်ချခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်က ပေါက်ကြားခဲ့သော အမေရိကန် သံတမန် လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ၀ီကီလိခ် ကြေးနန်းတွင်လည်း မြန်မာ တောတွင်းရှိ စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းများတွင် ရာနှင်ချီသော မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံသားများလာရောက် လုပ်ကိုင်နေသည်ကို အမေရိကန် သံတမန်များက ပြောဆိုထားမှုများပါဝင်ခဲ့သည်။
ကင်ဂျုံအီးလ် အသက် ၆၉ နှစ် သည် ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မြောက် ကိုရီးယား အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်အီဆွန်း၏ သားဖြစ်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်က ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် အာဏာ အရှိဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကင်ဂျုံအီးလ်သည် သားဖြစ်သူ ကင်ယုံအန်း အား သူ၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံရန် မကြာသေးမီနှစ်ကတည်းက စီစဉ် ထားခဲ့သည်။
မြန်မာ အစိုးရကမူ ကင်ဂျုံအီးလ် ကွယ်လွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သို့မျှ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီလ် ကွယ်လွန်
by FNG on December 19, 2011
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီလ် သည် အသက် ၆၉ နှစ် အရွယ်တွင် မြို့ တော် ပြုံးယမ်
ရှိ သမ္မတ နန်းတော် မှ ရထားဖြင့် ခရီးသွား နေစဉ် အသက် ၆၉ နှစ် အရွယ် ဉ် နှလုံး ရော ဂါ
ကြောင့် ကွယ် လွန် ခဲ့ သည် ဟုမြေက် ကို ရီးယား အစိုးရ အာဘော် KCNA သတင်းဌာန
က ကြေငြာ ခဲ့ သည်။
ကြီးမြတ် တော် မူလှ သည့် ကျွနပ် တို့၏ ချစ်လှစွာ သော ခေါင်းဆောင် ကြီးသည် အသက် ၆၉
နှစ် အရွယ် တွင် သူ ၏ ချစ်လှ စွာသော ပြည်သူများ ကို စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်း စေပြီး နောက် ကွယ်
လွန် သွား သည် ဟု KCNA သတင်းတင် ဆက် သူ က ကြေငြာ သွား ခဲ့ သည်။
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီ ဟာသူ့ ရဲ့ သားဖြစ်သူ ကင်ဂျုံအွန်းကို နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်း
ဆောင် အဖြစ် နှင့် မြောက်ကိုရီးယား အလုပ်သမား ပါတီ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် မနှစ်က ပါတီ
တည်ထောင်ခြင်း ၆၅ နှစ် ပြည့် ချိန် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် နေ့ တွင် တရားဝင် အာဏာဆက်
ခံရန် အတွက် အာဏာ လွှဲ ပြောင်း ပေး ခဲ့ သည်။
ကင်ဂျုံအီလ် ကို ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ တွင် ခါဘာရောဗ် မြို့ဉ် မွေးဖွား ခဲ့
လူ့ ဘ၀ သို့ရောက် လာ ခါစ ကင် သည် အထီးကျန် မှု နှင့် ကြေကွယ် ဖွယ်ရာ များ ဆက် တိုက်
ဆိုသလို ကြုံခဲ့ ပြီး နောက် သူ သည် တည် ငြိမ် ရင့် ကျက် လာခဲ့ သည် ဟု မြောက် ကိုရီးယား
ထောက်လှမ်း ရေး အရာ ရှိ တစ်ဦး ၏ အင် တာနက် စာ မျက်နှာ တွင် ဖော် ပြထား သည်။
“အသက် ၅ နှစ် အရွယ် မှာ သူ့အကို ရေကန် လေးထဲ လိမ့်ကျ ပြီး သေသွားတယ်။ နောက် ၂
နှစ် နေ တော့ သူ့အမေ သေတယ်။ ချစ်လှစွာ သော ကျွန်တော် တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး သူ့ 
အဖေ ကင်အီဆွန်း က နောက် အိမ်ထောင် ပြုတယ်။ မိထွေး နဲ့မယား ပါ သား ရဲ ညိုငြင် မှု
တွေ နဲ့ပဲ သူ ကြီးပြင်း လာခဲ့ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ဂျင်းဆင်း ပဲ ထွက် တဲ့ နိုင်
ငံ ကို ထည်ဝါ စေခဲ့ တယ်” ဟု ရေးသား ဖော် ပြ ခဲ့ တယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ နှင့် နီးကပ်စွာ စစ်ရေး ဆက်ဆံ မှု ရှိ သည် ဟု အနောက် နိုင်ငံ တို့က စွပ်ဆွဲခံ
ထား ရ သည့် မြောက် ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် သည် တန်းမြင့် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား များ ကို
ကြည့် ရှု ခြင်း ဉ် ၀ါသနာ ပါ ပြီး ရုပ်ရှင် ထုတ် လုပ် ရေး လုပ် ငန်း ကို လည်း သဘောကျ သူ
မြန်မာ နိုင်ငံ ဉ် လွတ် လပ် ရေး ဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အကြောင်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး
ရန် စီစဉ် နေမှု ကို လည်း သူ သိရှိ ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့အာဇာနည် ကုန်း ကို
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ဗိုလ်မှူး ၁ ဦးနှင့် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ၂ ဦး စေလွှတ် ပြီး ဗုံး ခွဲ
လုပ် ကြံမှု ကို အဆိုပါ ဇာတ် ကား ဉ် ဖော်ပြ ခြင်း မပြုရန် အတွက် ရန်ကုန် မြို့ရှိ မြောက်
ကိုရီးယား သံရုံး မှတစ်ဆင့် အဆိုပါ ဇာတ်ကား ထုတ် လုပ် သူ အား လော်ဘီ လုပ်နိုင်
ကြောင်း မြန်မာ ၀ီကီလိခ် ပြော ရေး ဆိုခွင့် ရသူ က FNG သို့ပြောသည်။
တရုတ် သံ အမတ် က မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို
ယခင် သီတင်း ပတ်က တွေ့ ဆုံ ပြီး နောက် မြောက်ကိုရီးယား နှင့် ရုရှား သံ အမတ်
ကြီး များ လည်း ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် ကို လာရောက် တွေ့ဆုံ နိုင် သည် ဟု သတင်း
များ ထွက် ပေါ် နေ ခဲ့ သည်။
မြောက်ကိုရီးယား နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဆက်စပ်မှု ရှိနေခြင်းကြောင့် ဂျင်ဝဘ်၏ ခရီးစဉ် ရွှေ့ ဆိုင်း
အဆိုပါ အကြမ်း ဖက် မှု ကို ယနေ့ အထိ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရ က တရားဝင် တောင်
ပန် ခြင်း မရှိ သော် လည်း လက်ရှိ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦး ရွှေမန်းက မြောက်
ကိုရီးယား နိုင်ငံ သို့စစ်ခေါင်းဆောင် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ချိန် က တရားဝင် သွား
ရောက် လည်ပတ် ခဲ့ ပြီး ၊ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ခြားရေး ၀န်ကြီး က မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ 
ယမန် နှစ် က လာရောက် လည် ပတ် ခဲ့ သည်။
အထီးကျန် မြောက် ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် သည် “ဒီမိုကရေစီ စနစ် သို့သွား နေသည်”
“ပြောင်းလဲ မှု တွေ စနေ ပြီ ” ဟု ဘာဘာ ညာ ညာ မကြွေး ကျော် ဘူး သော် လည်း သူ၏
နိုင်ငံ တွင်း ဉ် ပင် စံ မြန်း နေရင်း အမေရိကန် သမ္မတ ဟောင်း ဂျင်မီကာတာ နှင့် ဘီလ် က
လင် တန် တို့ကို လေးကြိမ် ထက် မနည်း ကြို ဆို ဧည့်ခံ ဖူး သည်။
မြောက်ကိုရီးယား အတိုက်အခံ တို့ ထံ မှာ လာသည့် သတင်း များဉ် မူ ခေါင်းဆောင်ကြီး သည်
လုပ်ကြံ ခံ ရခြင်း ဟု ဆိုခြင်း ကြောင့် သဘောထား တင်းမား သူ တို့အာဏာဆက်ခံ မည်
ကို စိုးရိမ် ၍ ပြိုင် ဘက် တောင် ကိုရီးယား က နှစ် ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အဆင့် မြင့် ဆုံး စစ်ရေး
တပ် လှန့်မှု ကို ပြုလုပ် ထား သည်။
ကင်ဂျုံအီလ် သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့ မှ စပြီး ဖခင် ဖြစ်သူ ၏ အရိုက် အရာ ကို
ဆက်ခံ ခဲ့ သည်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီလ်၏ ဈာပန ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ တွင် ကျင်း
ပမည် ဟု KCNA သတင်း တွင် ဖော် ပြထား သည်။မြောက်ကိုရီးယား ပြည်သူများ နှင့် အလုပ်
သမား ပါတီ ၀င် များ သည် ခေါင်းဆောင်ကြီး သေဆုံး မှု ကြောင့် ၀မ်းနည်း ပက်လက် ဖြစ်နေ
သည် ဟု သတင်း က ဆိုသည်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီလ် သေဆုံး မှု နှင့် ပတ်သက် ပြီး နိုင်ငံ တကာ က
တုံ့ပြန်မှု များ ရှိရာ မြန်မာ နိုင်ငံ သို့လာရောက် လည်ပတ် မည့် ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်
ကြီး ၀ီလျှံ ဟိဂ် က မြောက်ကိုရီးယား အနေဖြင့် အပြောင်း အလဲ တစ်ခု အတွက်
အလှည့် အပြောင်း အခြေ အနေတစ် ရပ် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင် အချို့ က ကင်ဂျုံအီလ် ခောတ် လွန် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံ သည်
ဒေသတွင်း နိုင်ငံ များ အတွက် အန္တရာယ် ကြီး သည် ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
မြောက်ကိုးရီးယား ထံမှ နအဖ စစ်အစိုးရ ညူလက်နက် နည်းပညာ နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်း
၀ယ်ယူကြောင်း ကုလ ၄၅ မျက်နှာ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်
ပစိဖိတ် စစ်နယ်ဝှမ်း သစ် (အပိုင်း-၁)
မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ NLD ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် တွေ့မည်
By featured, ရန်ပိုင် on December 19, 2011 3:52 pm
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) မှတ်ပုံတင်ခြင်း အပြီးသတ်အစီအစဉ်အတွက် ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမကြာမီ သွားရောက်မည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
NLD မှတ်ပုံတင်မည်ဟု ကြေညာပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်မည့် အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုအတွက် NLD ပါတီ၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဦးတင်ဦး၊ ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှ ဦးဆောင်ရန် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ ပါတီရုံးချုပ်တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုန်းကြိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ပါတီရဲ့ မူဝါဒလမ်းစဉ်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အလံ၊ တံဆိပ် စတာတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် စတာတွေကို ကော်မရှင်မှာ ရှင်းပြဖို့ သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
NLD ပါတီသည် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ပါတီဝင်အများစု ဆန္ဒအရ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပြီး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပါတီဦးဆောင် ၂၁ ဦး၏ စာရင်းကို ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းနှင့် တကွ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပါတီတည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ယခု ပါတီခေါင်းဆောင်များက ပါတီ၏ ရည်ရွယ်ချက် မူဝါဒများကို သွားရောက်ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်သည်။
လောလောဆယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စဉ်းစားနေကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီး NLD ပါတီ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန်ကို မန္တလေးတိုင်း မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လျာထားထာသည်ဟု သိရသည်။
ဦးဝင်းထိန်က “တရားဝင်တော့ မကြေညာသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဇာတိဆိုတော့ အားလုံးက ၀င်ဖို့တောင်းဆိုနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါနေရာအတွက် ယခင်က မိတ္ထီလာမြို့နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသိန်းလွင်အား လျာထားထားသော်လည်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ အစားထိုးရန် လျာထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိတ္ထီလာမြို့နယ်သည် တပ်မ ၉၉ နှင့် လေတပ်စခန်းရှိသည့် တပ်နယ်မြေ ဖြစ်သည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ အားကောင်းသည့် နယ်မြေဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိ ဧရာဝတီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် နယ်မြေဖြစ်သည်။
အတည်မပြုနိုင်သေးသော သတင်းများအရ NLD လူငယ်တာဝန်ခံ မဖြူဖြူသင်းသည်လည်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု သိရသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို မည်သည်အချိန်တွင် ပြုလုပ်မည်ဆိုသည်ကိုမူ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ကြေညာခြင်းမရှိသေးပေ။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဆိုလျှင် ကြိုဆိုကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ပြုပြင်မည့် နှစ် (၃၀) စီမံကိန်...
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်...
“I MET A MAN FROM BURMA” will screen on Toronto ,C...
(ကျောင်းသားများနေ့ ) အထိမ်းအမှတ်ပွဲဗမာနိုင်ငံလုံးဆ...
ကင်မ်ဂျုံအီအထ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ရေးသားခဲ့သူ စာရေးဆရာ ဟိန...
ပြည်တွင်းအပြောင်းအလဲ နဲ့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် ...
လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ ဦးမြင့်သွင် လိုင်စင် ၃ နှစ် ...
ဦးတင်ဦးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို မှတ်ပုံတင်မ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသည့် ဆောင်းပါး- ၃ ပြည်သူ့ခေတ...